Unqabileyo Ukufumana I-Young IITians NGEMINYE Ezingqondweni: I-Sundar Photosi - ITS
Unqabile Ukufumana I-Young IITians NGEMINYE Ezingqondweni: Sundar Photosi
Kharagpur: Ukuvuma ukuba wayesebenzisa iiklasi kwiindawo zakhe zokwakha ku-IIT Kharagpur, i-Google CEO i-Sundar Photosi ngoLwesine yatshengisa ukumangalela ukufumanisa ulutsha oluthetha ukuba ungene kwi-IIM njengoko wayekhathazekile ngokubaluleka kokufumana amava okwenene.
"Kukho ubunzima obunzima ukuthatha emva kokulungiswa kwemimiselo yonke ngemisebenzi yakho (e-India). Xa usesikolweni esikolweni esiphakamileyo uyabona isikolo. Ndiya kutshwenyeka gqitha ukuba abantu bangene kwiIITs kwaye ngokukhawuleza bacinga nge-IIMs njl. Kunzima kakhulu ukufumana amava afanelekileyo, "u-Photosi uthe kwiseshoni enembile kunye neIITians apha namhlanje.
Emuva kwiminyaka eyi-23 ekugqibeleni i-B.Tech kwi-1993, wathi phantsi kwe-investing ininzi yamandla kwiincwadi kwaye iguqule ngokuzifundela.
Ngaphandle kwesikhala sokukhumbula izizathu zakhe iintsuku, waya kwigumbi lakhe lehostele, wadibana nootitshala kunye nezixhamli.
"Ngokucacileyo," wayeyiphendule xa ebuzwa ukuba wayenayo iiklasi.
"Sasihlala sihlala ngokukhawuleza ngexesha langokuhlwa kunye neeklasi ezilahlekileyo," wahlaziya.
UFikilei uthe ufumana umxhwele ekuphulaphuleni ukuba u-grade-grade grade understudy uqalile ukulungiselela iIITs.
"Ngexesha lam, ipolisi yabantu bathi lo mntu akazange angene kwesi sikolo kwaye oko kukuphela kwesitalato kuye," wahlaziya.
Wafundisa izinto eziphathelele indawo yakhe yokugqiba ukuzama izinto ezahlukeneyo, phuma kwisilungu, ulungelelanise kwaye uthathe emva kwentshiseko yabo.
E-India, makube njalo, kunokwenzeka, uthe, unesiseko esomeleleyo kwimfundiso njengabagcini baxoxwa ngaso rhoqo.
E-America, u-Photosi uthe, e-Stanford, umzekelo, i-pick-up ikhethile i-majors nje kuphela xa iphelileyo kunyaka wayo wokugqibela.
Ekugqibeleni ukugqitywa kweBTech yakhe kwisakhiwo se-metallurgical kunye nezinto zokwakha izinto ezivela kwi-IIT, i-Photoi yenza i-MS yakhe kwiNjineli kunye neNzululwazi yezoLwazi kwiYunivesithi yeStanford kunye ne-MBA esuka kwiWharton School kwaye yajoyina i-Google kwi-2004.
Kwakukho ngeli xesha kwiimeko zokuba akazange amthande ngothando nomfundi wakhe ofunda naye u-Anjali waza watshata naye kamva.
Wayehlola indlela awayehlala ngayo kwihostele yamantombazana amancinci ukuza kumhlangabeza aze ahlazeke xa umntu ekhwaza ngomsindo, esithi "U-Anjali Sundar ubiza wena".
Emva kokutshisa ngeminyaka emine engavamile kwiimeko, wathi, wayevakalelwa xa wayefuna ukuphuma.
"Kuyinto emangalisayo ukubuyela emva kwe-23 iminyaka emva kweqiniso," kusho u-Photosi onomdla.
I-3 IBM Training Course Wonke umntu kumashishini kufuneka asebenzise
Izifundo ze-10 ze-Microsoft ziya kuguqula indlela ocinga ngayo